ဇူလိုင်လ 2016 |3၏စာမျက်နှာ 67 NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » ဇူလိုင်လ (စာမျက်နှာ 3)
BrandStar တည်နေရာ: Deerfield သဲသောင်ပြင် FL အမေရိကန်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း (အလယ်အလတ် / အလယ်အလတ်အဆင့်) ။ ထုတ်လွှင့်ကင်မရာကျွမ်းကျင်မှု (အလယ်အလတ် / အလယ်အလတ်အဆင့်) ။ လိုအပ်အဖြစ်ဗီဒီယိုများတည်းဖြတ်ရန်စွမ်းရည်ကို ... ။ more >>
လက်ထောက် eBook ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်း
ရှိမုနျကို & Schuster တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန် # လက်ထောက် eBook ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်း။ InDesign နဲ့ Photoshop တစ်ပေါင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်။ ဒါက >> စာအုပ်ဒီဇိုင်းနှင့် ... နောက်ထပ်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်
VIDEO PRODUCTION Supervisor - Audio / Video PRODUCTION Supervisor
အရီဇိုးနားတည်နေရာ၏ပြည်နယ်လွှတ်တော်: ဖီးနစ် AZ အမေရိကန်ဗွီဒီယို PRODUCTION Supervisor ။ >> ပို ... အသံအမြင်အာရုံဘဏ်ဍာအဘို့ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စကားသံကိုအခွက်တဆယ်ပေးနှင့် In-အိမ်သူအိမ်သားကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မယ်
နှစ်ဆယ်ရာစုမြေခွေးတည်နေရာ: Los Angeles မြို့, CA အမေရိကန်စီမံကိန်းမန်နေဂျာအသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာအစီအစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုရုံး (PMO) join ဖို့။ စီမံကိန်းမန်နေဂျာ >> ပိုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, စီမံခန့်ခွဲခြင်း, ထောက်ပံ့ ... အတွက်တာဝန်ရှိသည်
#IBCShow 2016: အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်း GmbH ရဲ့ထူးခွားက Ultra HD-41 ဒီဇိုင်း!
NEP ဆွစ်ဇာလန်ဇူလိုင်လ4စတင်ခဲ့ရာဆွစ်ဇာလန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Raiffeisen စူပါလိဂ်ရာသီအလိုက်လွှမ်းခြုံ၏သာလွန် 2016K resolution ကိုထုတ်လုပ်နဲ့အတူဆဲပါ! အဆိုပါ်က S 12 4K OB Van က Ultra HD-41 ကိုခေါ်မြင့်မားဆုံးကိုထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပေါင်းစည်းမှုကုမ္ပဏီထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်း GmbH ကထုတ်လုပ်ဆွစ်ဇာလန်အတွင်းပထမဆုံး 4K OB Van ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါက Ultra HD-41 တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသစ်သောအခန်းကကမ်းလှမ်း ...
Allstar အသံ selection HelixNet, ကော်ပိုရိတ်ပွဲထုတ်ကုန်များနှင့်အငှားဌာနများအဘို့အ FreeSpeak II ကို
Burbank,, CA ၏ Allstar အသံ - စီးပွားရေးအတွက် 40-ပေါင်းနှစ်ပေါင်းနှင့်အတူတစ်ဦးငှားရမ်းအိမ်သူအိမ်သား - ၎င်း၏ကော်ပိုရိတ်ဖြစ်ရပ်ဘဏ်ဍာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်းမှုများအဘို့အကိုရှင်းလင်းရန်-Com ရဲ့ HelixNet ဒီဂျစ်တယ်ကွန်ယက်ကို partyline အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးနှင့် FreeSpeak II ကိုကြိုးမဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ Allstar အသံမကြာသေးမီက Palm Springs ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, အမှာချထားခဲ့မိုဘိုင်းယူနစ်သို့နှစ်ခုစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ထားပါတယ် ...
3 ၏စာမျက်နှာ 67«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»